प्रिय! तिमीसँग प्रेम गरेर मलाई “दोस्रो नवराज बिक” बन्न मन छैन। | Butwal Dainik
कुरा सुरु गरौ, वि.सं. २०६३, जेठ २१ गतेको दिनबाट । अर्थात नेपालञ कानुनी रूपमा “जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र” घोषणा भएको दिन । त्यसपछि पहिलो चोटि २०६८ सालमा जातिय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसदबाट जारी भयो । इतिहास साक्षी छदैछ, कतिजना दण्डित भए र, कतिजनाले उन्मुक्ति पाए ? यो ऐन लागु भएपछी २०७४ साल मंसिरसम्म मात्र १६ जनाले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारणल्र ज्यान गुमाउनु पर्यो । १४ औं शताब्दीतिर राजा जयस्थिती मल्लले कामको आधारमा मानिसलाई जातमा विभाजन गरेको पनि आज यतिका समय बितिसक्यो । सदियौं बित्यो तर हामी त्यही छौ, जतिबेला १४ औं शताब्दीतिर थियौं । भलै बिस्तारै घट्ने क्रम छ । तर जुन गतिमा घट्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको देखिदैन ।
जातीय विभेद नियन्त्रणका लागि कसैले केही नै गरेनन् त ? हैन्, गरिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७देखि भरतपुर महानगरपालिकाले दलितसंग प्रेम विवाह गर्नेलाई ५० हजार र मागी विवाह गर्नेलाई एक लाख प्रोत्साहन रुवरुप पुरस्कार प्रदान गर्न थाल्यो । भर्खरै मात्र धरान उपमहानगरपालिका दलित विकास समितिको आयोजनामा पुर्वमन्त्री मीन विश्वकर्मा र उनकी श्रीमती निरु पौडेलसहित १४ अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्यो । उल्लेखित प्रतिनिधि घट्ना मात्र हुन् । यसरी हेर्दा राम्रा काम पनि भएका इतिहास छन् । तर अझै कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम विवाह गरेकै कारण सयौं दलित युवा जबरजस्ती करणी, अपहरण र बन्धकका मुद्दामा जेल जीवन कटाउन बाध्य छन् । कतिपय दलित भएकै कारण कोठा भाडा पाउनबाट बन्चित छ । कत्तिले दलित भएरै गाउँबाट लखेटिएका छन् । जातीय भेदभावलाई दण्डित गर्ने कानुन बनेयता मात्रै १७ जना दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भए । त्यसमध्ये ७ जनाले अन्तरजातीय प्रेम र विवाहका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
यसो भनिरहदा सबैले अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गर्नुपर्छ भनेको पनि हैन् । तर जातकै आधारमा कुनै प्रेमले अन्याय पाउनु भने हुँदै हुँदैन । जातीय विभेदलाई साँच्चै जराबाटै निर्मूल पार्ने हो भने आजको पुस्ताले अन्तरजातीय विवाह गर्ने आँट गर्नु पर्छ नै पर्छ । फेरि मैले यो पाईला चाल्ने आँट गरिनँ भने भोलिका मेरा सन्ततिले मलाई के भन्नेछन् ? । त्यसैले यो पुस्ताले अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्न सके अर्को पुस्ताले अवश्य मागी विवाह सहजै गर्न सक्नेछन् । किनकी एउटा बाटो हामीले कोरीसकेका हुनेछौँ । मलाई के थाहा छ भने, मैले मबाट हुनसक्ने केही योगदान परिवर्तनका नाममा दिन सकिनँ भने म र मेरा कयौँ भावी सन्तानले नवराजहरु मरेका समाचार सुनि रहनु पर्नेछ, भोगी रहनु पर्नेछ । त्यसैले म डराउदिन । लड्नेछु समाजसँग र उठ्नेछु शिर ठाडो पारेर । किनकी एकदिन यहि समाजले जातीय विभेद र छुवाछूतको विषयमा आवाज उठाउने मान्छेलाई सहि साबित गर्नेछ ।-लेखक- सुबिन विश्वकर्मा (सुनसरी)